Huawei သည် Kirin ပရိုဆက်ဆာများကိုပြwithoutနာမရှိဘဲဆက်လက်ထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ | Androidsis
Huawei ၏လက်ရှိအခြေအနေသည်မကောင်းမွန်ပါ။ The ဗီတိုအာဏာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအားဖြင့်ထွက်သယ်ဆောင် ဒါကြောင့်သိသိသာသာအာရှထုတ်လုပ်သူကိုထိခိုက်သည်။ သူတို့၏ဖုန်းများရောင်းချမှုသည်ဥရောပ၌အကြီးအကျယ်ကျဆင်းခဲ့သည် နှင့်မနေ့ကကျနော်တို့ကလက်မှတ်ထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် သင်၏ဖြေရှင်းချက်များတွင် microSD ကဒ်အထိုင်ကို သုံး၍ မရပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့များအတွက်ကောင်းသောသတင်း Huawei.
ဟုတ်ပါတယ်, Shenzhen အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏ Hisilicon Kirin SoC အကွာအဝေးကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းရင်း? TSMC သည်အမေရိကန်အစိုးရ၏ကန့်သတ်ချက်များကိုလိုက်နာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမက join လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ဟွာဝေကိုဗီတိုအာဏာသုံးပါ Intel, Google နှင့် ARM တို့မှထုတ်လုပ်မည်။ သို့သော်သူသည်ဤဗီတိုအာဏာမှမည်သို့လွတ်မြောက်သွားသနည်း။
TSMC သည်အမေရိကန်ပို့ကုန်စည်းမျဉ်းများကိုမလိုက်နာပါ။ Huawei ၏သက်သာမှုများစွာရှိသည်
ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာများအရ, ၏ဌာနချုပ် TSMC ထိုင်ဝမ်တွင်ရှိသည် (၎င်း၏အတိုကောက်မှာထိုင်ဝမ် Semiconductor Manufacturing Co) ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တင်သွင်းမှုနှင့်တင်ပို့မှုစည်းမျဉ်းများကိုမလိုက်နာသောကြောင့် Huawei ၏ပရိုဆက်ဆာထုတ်လုပ်သူများဖြစ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ARM ဆုံးရှုံးမှုသည်ကြီးမားသောထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အနည်းဆုံးကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအတွက်မဆိုဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ပေးသွင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်အဲဒါပုံရသည် Huawei ကြိုတင်ပြီးသူ့ကျောကိုဘယ်လိုဖုံးအုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဗီတိုအာဏာမတိုင်မီ။ ဤနည်းအားဖြင့်အာရှကုမ္ပဏီတွင်အမြဲတမ်းလိုင်စင်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် ARMv8 ၏ဗိသုကာဘဝကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းဗိသုကာအခြေခံကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်သည့်ချစ်ပ်များကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း Huawei ၏မှောင်မိုက်သောအနာဂတ်အတွက်အလင်းအချို့ကိုအလင်းဖြာပေးသောလေကောင်းလေလေကောင်းလေသန့်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ Donald Trump အစိုးရသည်အာရှထုတ်လုပ်သူအားဗီတိုအာဏာသုံးပြီးဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီ၏ပုံရိပ်ကိုရိုက်ခတ်သွားသောဒဏ်ခတ်မှုသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ သင်၌ရှိသောပြproblemsနာများကိုမြင်ပြီးအနာဂတ်၌သင် ထပ်မံ၍ ရနိုင်သည်ကိုသင်မြင်တွေ့ပါလိမ့်မည် ဟွာဝေမိုဘိုင်းတစ်လုံး ၀ ယ်မလား?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei အတွက်လေကောင်းလေလေ။ Kirin ပရိုဆက်ဆာများကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်